Wararki Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Caawa Fiidkii Qoreen Wargeysyada Yurub - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Wararki Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Caawa Fiidkii Qoreen Wargeysyada Yurub
June 14, 2019 | Filed under: CAYAARAHA | Posted by: Apdihakem Omer Adem
Iyadoo haatan uu furan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda xagaagan, xanta suuqa ayaa ah mid aan kala joogsi laheyn iyadoo warbaahinta isboortiga ee Yurub ay isku dayayso inay xog ka soo gudbiso xaaladii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga iyo kooxaha.
Hadaba waxaan idiin soo uruurinay wararkii ugu waa weyn ee ay warbaahinta Yurub qoreen caawa fiidkii.
Matthijs de Ligt ayaa haatan u janjeera dhanka Paris Saint-Germain madaama uusan boos joogta ah ka heleynin Barcelona oo ay joogaan Gerard Pique, Samuel Umtiti iyo Clement Lenglet. (Onda Cero)
Tababare Ernesto Valverde ayaa ogolaaday in Ivan Rakitic uu kooxda Barcelona ka tago xagagaan haddii dalab macquul ah loo helo, iyadoo Man United ay hore u xiiseyneysay. (Onda Cero)
Everton ayaa ku dhow inay dhameystirto saxiixa Andre Gomes. Barcelona ayaa rajeyneysa inay ku hesho 27 milyan ginni laakiin weli Everton ma aqbalin inay bixiso lacagtaas. (Sport)
Juventus ayaa bixin doona 3.5 milyan ginni oo magdhow ah si ay u la soo wareegaan tababaraha Chelsea Maurizio Sarri. Blues waxay lacagtaas u adeegsna doontaa inay Frank Lampard kaga soo kaxeyso Derby County. ( Gazetta dello Sport)
Tababaraha cusub ee Roma Paulo Fonseca ayaa doonaya inuu la soo saxiixdo xiddiga khadka dhexe ee Manchester United Fred oo uu kula soo shaqeeyay Shakhtar Donetsk. Roma ayaa dooneysa inay xiddiga khadka dhexe ee Brazil kula wareegto amaah ka dibna ay gadaal ka iibsato. (Il Romanista)
PSG ayaa kala xiriirtay Napoli xiddiga Lorenzo Insigne. Kooxda Serie A ka dhisan ayaa dooneysa inay qandaraas shan sannadood oo cusub u sii bandhigti 28 jirkaan laakiin waa ay dhageysan doonaan dalab kasta oo ka badan 80 milyan ginni. (Gazzetta dello Sport)
Adrien Rabiot ayaa wadahadalo kuka jira Juventus si uu si bilaash ah ugu sii wareego xagaagan marka uu dhamaado qandaraaskiisa PSG. (Corriere dello Sport)
Ivan Perisic ayaa loo ogolaan doonaa inuu ka tago Inter Milan xagaagan hadii kagu sii dalbado 35 milyan ginni. Xiddigaan waxaa hore loola xiriirinayay kooxaha Man United iyo Arsenal. ( Corriere dello Sport)
Qaar ka tirsan saraakiisha Real Madrid ayaa isku dayay inay ka dhaadhiciyaan tababare Zinedine Zidane in kooxda ka keeni xiddiga Tottenham Christian Eriksen. Si kastaba macalinka Real Madrid ay ku adkeysanaya inuu doonayo inuu Bernabeu keeno xiddiga Man United Paul Pogba. ( L’Equipe)
Xiddiga khadka dhexe ee Faransiiska Pogba ayaan dooneynin inuu baaqi ku sii ahaado Man United. Pogba ayaa doonaya inuu u wareego Real Madrid ama ku laabto kooxdiisa hore ee Juventus. (L’Equipe)
Kabtanka Arsenal Laurent Kosicleny ayaa si lama filaan ah u noqday bartilmaameedka Borussia Dortmund. Kooxda Jarmalka ayaa dooneysa daafac dhexe oo khibrad leh. (Bild)
United ayaa waxaa ka dhaadhacsan in Sean Longstaff inuu doonayo inuu u dhaqaaqo Old Trafford inkastoo uu saxaafada ka hor sheegay inuu u heelan yahay Newcastle (London Evening Standard)
Xiddiga khadka dhexe ee Chelsea Tiemoue Bakayoka ayaa shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu u dheelo kooxda Paris Saint-Germain. (Standard)
Arsenal ayaa qorsheyneysa inay qandaraasyo cusub u soo bandhigto Pierre-Emerick Aubameyang iyo Alexandre Lacazette iyagoo doonaya inay xaqiijiyaan mustaqbalka weeraryahanadooda. (Football.London)
Daafaca midig Kyle Walker ayaa ku dhow inuu qandaraas kordhin labo sannadood ah u sameeyo Manchester City. (Manchester Evening News)
Kooxda Everton ayaa lala xiriiriyay 20 jirka kooxda River Plate, Santiago Sosa ( Liverpool Echo)